Marc 16 BDS - Marko 16 NA-TWI | Biblica América Latina
Marc 16 BDS - Marko 16 NA-TWI
1Ade kyee a Homeda no twaam no, Maria Magdalene ne Salome ne Yakobo ne na Maria kɔtɔɔ nnuhuam sɛ wɔde rekɔ akɔsra Yesu amu no.
2 Da a edi nnawɔtwe no kan anɔpahema no, ansa na owia bepue no, wɔde nnuhuam no baa ɛda no so. 3 Wɔnam kwan so rekɔ no, na wɔredwen nea ɛbɛyɛ a wobepirew ɔbo no afi ɛda no ano no ho.
4 Nanso wɔreyɛ adu hɔ no, wɔmaa wɔn ani so hui sɛ, obi apirew ɔbo kokuroko no afi ɛda no ano. 5 Wɔkɔɔ ɛda no mu kohuu aberante bi sɛ ɔhyɛ atade fitaa te nifa so hɔ. Wohuu no no, wɔbɔɔ birim. 6 Nanso, aberante no ka kyerɛɛ wɔn se, “Munnsuro. Ɛnyɛ Nasaretni Yesu a wɔbɔɔ no asɛnnua mu no na mohwehwɛ no no? Onni ha! Wasɔre! Monhwɛ faako a wɔde no toe hɔ! 7 Afei monkɔ na monkɔka eyi nkyerɛ n’asuafo no ne Petro se, “Yesu redi mo anim akɔ Galilea. Ɛhɔ na mubehu no, sɛnea ɔka kyerɛɛ mo ansa na ɔrewu no!’“
8 Mmea no de hu ne ahopopo guan fii hɔ a, na obiara ntumi ne ne yɔnko nkasa.
9 Kwasida anɔpa na Yesu sɔre fii awufo mu. Onipa a oyii ne ho adi kyerɛɛ no kan ne Maria Magdalene, ɔbea a otuu ahohommɔne ason fii ne mu no. 10 Maria Magdalene kɔɔ asuafo no nkyɛn kohuu wɔn sɛ wɔn werɛ ahow, na wɔresu. 11 Ɔka kyerɛɛ wɔn se, wahu Yesu na ɔte ase. Nanso, wɔannye no anni.
12 Akyiri yi, Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ wɔn mu baanu a wɔnam fi Yerusalem rekɔ akuraa, nanso wohuu no no, mfitiase no, wɔantumi anhu sɛ ɛyɛ ɔno, efisɛ, na wasesa. 13 Akyiri yi a wohuu onipa ko a ɔyɛ no, wotuu mmirika san baa Yerusalem bɛka kyerɛɛ nkae no, nanso obiara annye wɔn anni.
14 Akyiri no a asuafo dubaako no te adidii no, oyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn. Ɔkaa wɔn anim wɔ gyidi a wonni ne gye a wɔannye wɔn a wɔbɛkae se wasɔre no anni no ho.
15 Afei ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ nnipa nyinaa. 16 Na obiara a ogye di ma wɔbɔ no asu no, wobegye no nkwa. Na obiara a onnye nni no, wobebu no fɔ.
17 “Saa nsɛnkyerɛnne yi bedi wɔn a wogye me di no akyi. Wɔde me din betu ahonhommɔne, na wɔakasa kasa foforo. 18 Wobeso awɔ mu, na sɛ wɔnom awuduru bi mpo a, ɛrenyɛ wɔn hwee; wɔde wɔn nsa begu ayarefo so, ama wɔn ho ayɛ wɔn den.”
19 Awurade Yesu ne wɔn kasa wiei akyi no, wɔfaa no kɔɔ soro na ɔkɔtenaa Onyankopɔn nsa nifa so.
20 Eyi akyi no, asuafo no kɔkaa asɛm no wɔ baabiara, na Awurade kaa wɔn ho ma wɔyɛɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade ahorow nso, de hyɛɛ wɔn nsɛm a wɔkae no den.
NA-TWI : Marko 16